ko htike's prosaic collection: စက်တင်ဘာလက မေတ္တာပို့ လမ်းလျှောက်ခဲ့သော မဂ္ဂင် ကျောင်းမှ သံဃာတော်များ နအဖ၏ ရက်စက်မှုခံနေရ
Ciao! I'm mary from Italy....i cannot read the text, execuse me for my little english....I say PEACE FOR BURMA!
26 November 2007 at 20:53
I feel very sad to read about these new. what should we do ? We all Burmese must do something to change our life to get freedom..
27 November 2007 at 03:08
i can't keep crying.how we can send donation? can you find the way?
ဒါဟာ သာသနာ တိမ်ကောခြင်းရဲ့ လမ်းစပဲ။ သမိုင်းမှာ ဆင်တူ နမူနာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ သာသနာ ညှိုးမှိန်အောင် လုပ်တဲ့ မင်းဆိုးမင်းညစ်တွေကို အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားမှ ဖြစ်မယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ရင် သမိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက် သာသနာ့ တရားခံ ဖြစ်ပြီ။